Mogadishu Journal » Masraxa Furan AJAKIS ee Universal Tv Oo ah Qandaraas Reer Galbeed Loogu soo horjeedo Diinta Islaamka iyo Dhaqanka Soomaaliyeed
Asc Soomaaliyeey, Waayahaan dambe SOMALI UNIVERSAL TV ay qandaraas kusoo qaatay inay soo bandhigaan barnaamij loogu magacdaray Masraxa Furan ee ninka soo bandhigay hore magaciisa Islaamka ku badalay magac nin gaal ah leeyahay oo la yiraa AJAKIS. Haddaba , waxaa is weydiin mudan walaalayaal nin magaciisa ku badashay magac gaal waxa laga sugaayo soo maaha inuu u gudbiyo waxkasta oo qatar.
MASRAXA FURAN ee AJAKIS ninka labaxay waxaa uu caadeeystay in uu kusoo bandhigo SOMALI UNIVERSAL TV
anshax xumo iyo dhaqamo laga keenay wadamada reer Yurub iyo America dhaqamadaas xunxun waxaa soo bandhigo gabdha iyo wiilal laga keenay wadamada reer Yurub iyo America oo xiran dhar ku dhegan oo caawradooda loogu talagalay inay muuqato dharkaas gabadhaha iyo wiilasho Foodaha ujaran oo u labisan sida labiska gaalada u labistaan taasoo lagaga danleeyahay maskaxdooda la rogo oo lagu shubo dhaqamada reer galbeedka taasoo lid ku ah Diinteena Islaamka iyo dhaqankeena Soomaali . SOMALI UNIVERSAL TV waxaa kale ay ka faa,iideeysanayaan maadaama barnaamijyada fooshaxun xun ay soo bandhigayaan aynaan soo marin Wasaaradda Garsoorka iyo Diinta
Maxaa yeelay barnaamijyada uu ka mid yahay MARAXA FURAN waa barnaamij Qandaraas xoogan lagu soo qaatay oo larabo in lagu dhalan rogo dhalinta Soomaaliyeed meel walba ha joogaan si loo tuso waxyaabaha anshaxa xun oo uu soo tebiyo ninka magaciisa ku sheego AJAKIS oo ah magac gaal aanaan ahayn magac Muslim.
Hadaba, maalmahaan ayaa masaajiyada ,culimada iyo waxgaradka kunool Soomaaliya ku wargelinayaan dowlada iyo maamul gobleedyada in lajiijiyo barnaamijka MASRAXA FURAN AY SOMALI UNIVERSAL TV kabaxa barnaamijkaas oo Qatar halis ku ah Diinta Islaamka, Sunnada Nabigeena NNKH iyo HIDAHA IYO DHAQANKA dhalniyarada Soomaaliyeed leeyihiin.
Muxuu salka ku hayaan khilaafka Taaabit iyo madaxtooyada Soomaaliya
Maamulka gobolka Banaadir oo War ka soo saaray arrimaha dhulka danta guud